XZ400 kwụ Directional Drilling rig
Igwe ihe eji egwu uzo nke uzo XZ400 nwere onu ogugu kachasi nke 900mm, ikike kachasi ike nke 400kN, ntaneti nke 14000N · m, na ihe igwe eji ebu 11.5t.
XZ400 HDD nwere kọmpat usoro na ezigbo mma. Ya isi oru arụmọrụ parameters ruru anụ ụlọ elu larịị. Isi akụkụ na mmiri na corollary akụkụ nke anụ ụlọ ama ama na nwere ezi arụmọrụ na a pụrụ ịdabere na àgwà, huu ụda pụrụ ịdabere nke dum igwe.
Atụmatụ Okwu Mmalite nke XZ400 HDD
1.Hydraulic pilot na-achịkwa, na-enye arụmọrụ arụmọrụ dị mma na iwu na-agbanwe agbanwe, akara nke mbụ nke mmiri hydraulic iji hụ na ntụkwasị obi nke igwe hydraulic igwe.
2.Rack and pinion sliding, iji hụ na nkwụsi ike nke ụgbọ ahụ na ntụkwasị obi nke ị na-arụ ọrụ. Ajụjụ sere n'elu, XCMG proprietary patented Ajụjụ sere n'elu, sere n'elu osote technology nwere ike ukwuu chebe malite ịgba anwụrụ eri, ndụ ọrụ nke malite ịgba anwụrụ 30% abawanye.
3.Two-ọsọ ike isi, na-agba ọsọ na ala na-agba mgbe mkpọpu ala na-adọkpụpụta azụ iji hụ ezigbo ụlọ; mgbe ebutu akuakuzinwo anwụrụ na-enweghị ibu, ike isi nwere ike mee ngwangwa eji, mbenata inyeaka oge na rụọ ọrụ arụmọrụ.
4.Semi-akpaka loading na ebutu nke malite ịgba anwụrụ ngwaọrụ, ifiọkde akpaka na oru oma ewu, n'ụzọ dị irè mbenata na-eri na-arụsi ọrụ ike.
5.Support iche iche mkpa nke ndị ahịa, na igwe nwere ike na-abawanye na akpaka dakpuo anwụrụ njikwa ngwaọrụ, akpaka anchoring usoro, tagzi, ntụ oyi ikuku, oyi mmalite, -na mmiri, apịtị saa, apịtị throttling na ngwaọrụ ndị ọzọ.
Igwe hydraulic tubo
Ije ije ọsọ reducer
XZ400 HDD igwe na-amalite mgbe esonyere ndepụta mbukota, gụnyere ndị na-esonụ oru akwụkwọ ：
Akwụkwọ ngwaahịa / Ntuziaka Ngwaahịa / akụkụ ngwaahịa Atlas / Nhazi mmezi ntuziaka / Mpepụta mgbapụta eji na ntuziaka ntuziaka
Nke gara aga: XZ320D kwụ directional mkpọpu ala rig
Osote: XZ420E kwụ directional mkpọpu ala rig
Oregwọ Borewell Machine
Igwe eji arụ ọrụ Hydraulic